I-Rustic Ennis Townhome w/iBalcony-Hamba uye eDolophini
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguEvolve
UEvolve ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uEvolve iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Uhambo olungenasiphelo lwaseMontana lulindelwe kule ndlu ine-2, igumbi lokuhlambela eli-1 lokurenta kwidolophu yase-Ennis! Ibekwe kumgama wokuhamba ukusuka kuyo yonke into ephakathi kwedolophu yase-Ennis kunye neyure nje enye yokuqhuba ukuya e-Yellowstone National Park, esi sisiseko sekhaya esifanelekileyo okanye iqela labahambi aba-4 abajonge ukuba neholide enye kwiBig Sky Country! Yiba namava okuhambahamba okukumgangatho wehlabathi, ukuloba, ukukhwela ibhayisekile ezintabeni, okanye ukukhwela amanzi amhlophe ngaphambi kokuba ubuyele ekhaya ukuze ubukele ukutshona kwelanga emva kweentaba!
Igumbi lokulala elikhulu: Ibhedi yenkosi | Igumbi lokulala 2: King Bed
Le dolophu intle ine-1,200 yeenyawo zesikwere sendawo yokuhlala echongiweyo ngokungcamla kunye nabo bonke ubumnandi bekhaya! Imigangatho yokhuni oluqinileyo kunye nokuhonjiswa kwe-rustic kukunika imvakalelo yokwenyani yokuba kwi-adventure yaseMontana.
Ngena ngaphakathi kwaye ukhabe umva kwisofa yesikhumba ehonjisiweyo kwaye ubukele imiboniso oyithandayo kwiscreen esisicaba seTV. Sebenzisa ukufikelela kwi-intanethi engenazingcingo ukusefa kwi-net kwaye ufumane iyure yolonwabo yasekuhlaleni.
Hamba ibhloko enye ukuya evenkileni uyokuthatha zonke iigrosari oza kuzidinga ngexesha lokuhlala kwakho. Unokwenza zonke izidlo zakho ozithandayo ekhitshini elixhotyiswe ngokupheleleyo, okanye usebenzise igrisi yegesi ekwibalcony ukupheka isidlo esimnandi sebarbecue.
Hlala ngaphandle emva kwesidlo sangokuhlwa ukuze ubukele ilanga litsibela ngaphantsi kweentaba ezikude. Ukukhulula kwi-balcony yangasese ngeglasi yewayini yeyona ndlela ilungileyo yokuphelisa usuku ngalunye oluhle!
Uya kulala ngokufanelekileyo ebusuku kuwo omabini amagumbi okulala abanzi. Igumbi lokuqala libamba ibhedi yenkosi ngelixa igumbi lesibini lineseti yeebhedi ezingamawele ezinokuguqulwa zibe yibhedi yenkosi.
I-Ennis idume kwihlabathi ngobuninzi bayo bezilwanyana zasendle kunye nemisebenzi yangaphandle. Hamba iibhloko ezi-4 uhle uye kuMlambo iMadison ukuze uzame ukuloba i-trout emdaka, i-rainbow trout, okanye i-mountain whitefish. Iivenkile ezininzi edolophini zirenta okanye zithengisa izixhobo zokuloba ukuba uyalibala ukuzisa ezakho!
Abadlali begalufa baya kufuna ukubetha amakhonkco eMadison Meadows Public Course, nje iibhloko ezi-3 ukusuka kwindlu yedolophu. Ikhosi elungiswe kakuhle ihlala kwi-5,000 yeenyawo ngaphezu komphakamo wolwandle kwaye ibonelela ngeentaba ezimangalisayo.
Emva kohambo losuku, ukudlala igalufa, okanye ukuloba, tyelela iWillie's Distillery kwenye yeecocktails zabo zasekhaya! Iivenkile zokutyela ezininzi kwindawo ephakathi edolophini zibonelela ngokutya kwalapha ekhaya ongayi kuzilibala ngokukhawuleza/
Ukuba udiniwe u-Ennis, qhuba iyure enye ukutyelela i-Yellowstone National Park! Iimbono ezingalibalekiyo, iindlela zokukhwela intaba, kunye nokunye okuninzi kulindelwe kwenye yezona paki zixabisekileyo zaseMelika.
Izimvo eziyi-9 694
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ennis